Mora ve ny manao orinasa miaraka aminao amin'ny Internet? | Martech Zone
Mora ve ny manao orinasa miaraka aminao amin'ny Internet?
Zoma, Jona 26, 2009 Douglas Karr
Saika isan'andro dia mahazo rohy mankany amin'ny vokatra na serivisy an-tserasera aho ary sarotra amiko ny mahita izay ilaiko na mivezivezy amin'izay tiako haleha. Mahagaga ahy ny fahasarotan'ny orinasa sasany manangana ny tranonkalany. Hanao raharaham-barotra amin'ny tranokala maro aho raha tsy nataon'izy ireo izany!
Vao avy nanao izany tamin'ny alàlan'ny dingan-dahatsoratra marobe tao amin'ny tranonkala iray minitra lasa izay aho vao nahalala fa tsy maintsy mpampiasa voasoratra anarana hampiasa ilay tranokala aho. Rehefa nisoratra anarana aho dia voafafa avokoa ny safidiko teo aloha. Tsy hiverina aho! Raha tokony hiresaka momba ireo tranonkala mahatsiravina rehetra aho dia hikasika iray amin'izany nanao miasa tanteraka fa tsy!
Omaly aho narary narary andoha mafy. Somary sahirana aho tato ho ato - Manadikodina fanoloran-tena be dia be aho ary ny fiainako / tsingerin'ny asa dia nanjary korontana lehibe iray. Tsy misakafo ara-dalàna koa aho ary mandatsaka pounds tsy ilaina intsony. Nisy namana roa nanatona ahy ary nilaza tamiko fa mety izao ny fotoana hanaovana zavatra momba izany. Tsy tiako ny manatona dokotera, ka mitady fomba hafa.
Tao anatin'ny minitra vitsy taorian'ny nandefasako ny momba ny migraine tao amin'ny Twitter, dia nahazo ity bitsika manaraka ity aho Fanalahidy fanasitranana:
Nandeha nankany amin'ny Fanalahidy fanasitranana tranonkala, vakio ny sasany amin'ny antsipiriany ao amin'ilay tranokala, ary faly tokoa ianao fa nisy mpandrindra an-tserasera (eo an-tampon'ny isaky ny pejy!). Nijery ny fandaharam-potoako aho ary izao dia misy fivoriana fampidirana miaraka amin'i Cheryl kasaina hatao ny sabotsy maraina. Toy izao no fomba tokony hahamora ny tranokalanao. Sa izany?
Tags: hetra amin'ny varotra amin'ny Internetmobilenomicsvalandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety
Microsoft dia mitalaho amin'i Google handray tsenan'ny mailaka orinasa
Ahoana ny fomba hanombohana orinasa mahomby
Jun 26, 2009 ao amin'ny 3: 22 PM
mamy. Namandrika ny fotoanako tamin'ny Ossip's ao amin'ny Circle aho herinandro vitsivitsy lasa izay tamin'ny Internet. Mora sy tsy misy fanaintainana ilay izy, ary tsy nitaky ahy ny hiresaka amin'olona. Dork aho, ka tsy tiako ny miresaka amin'ny olona tsy fantatro. 🙂
Jun 26, 2009 ao amin'ny 11: 17 PM
Nanoratra lahatsoratra maromaro aho amin'ity sehatra ity, toy ny "Ahoana no TSY mahazo mpanjifa: Fahadisoana ara-barotra dimy mahazatra" Tsy handoto ny fanehoan-kevitrao eto amin'ny rohy aho, fa tsy ao amin'ny tranokalako voatanisa disqus (iza no manana tranokala tokana? )